परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
इसहाक | 17/12/2021 17:47 | अद्यावधिक गरियो 21/12/2021 09:02 | सामान्य
आफ्नो प्रियजन, आफ्नो साथी, आफ्नो परिवार, वा आफ्नो बच्चाहरु संग समय बिताउनु भन्दा केहि चीजहरू राम्रो छन्। दिनहरू, दिउँसो र रातहरू घरमा खेल्दै बिताउने र सँधै सम्झिने केही अविस्मरणीय क्षणहरू छोडेर। र यो सम्भव हुनको लागि, तपाईंलाई केहि चाहिन्छ परिवार को लागी सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल। मेरो मतलब सबैजना मनपर्ने बोर्ड खेलहरू, बच्चाहरू, किशोरहरू, वयस्कहरू र वरिष्ठहरू.
यद्यपि, उपलब्ध खेलहरूको संख्या र सबैलाई समान रमाइलो बनाउन कत्ति गाह्रो छ, यो छनौट गर्न सजिलो काम होइन। यहाँ हामी तपाईंलाई यो गर्न मद्दत गर्छौं, केहि उत्कृष्ट सिफारिसहरू सहित सबै भन्दा राम्रो बिक्री र रमाईलो तपाईं के पाउन सक्नुहुन्छ ...
1 परिवारसँग खेल्नको लागि उत्तम बोर्ड गेमहरू
1.1 डिसेट पार्टी र सह परिवार
1.2 तुच्छ पीछा परिवार
1.3 म्याटेल पिक्सनरी
1.4 पारिवारिक बूम
1.6 शब्दहरु संग प्रेम परिवार संस्करण
1.7 बिजाक बच्चाहरु आमाबाबु विरुद्ध
1.8 भरिएको दंतकथाहरू
1.9 धमाका! जंगली पश्चिम खेल
1.10 निराशाजनक अतिथिहरू
2 परिवारको रूपमा खेल्नको लागि रमाइलो बोर्ड गेमहरू
2.1 हेड-टू-हेड द्वन्द्वको बटालियनको खेल बन्द
2.3 कथा क्यूब्स
2.4 हसब्रो ट्विस्टर
3 राम्रो पारिवारिक बोर्ड खेल कसरी छनौट गर्ने?
परिवारसँग खेल्नको लागि उत्तम बोर्ड गेमहरू
त्यहाँ परिवारको रूपमा खेल्नका लागि केही बोर्ड गेमहरू छन् जुन सबैभन्दा प्रख्यात छन्। आफ्ना प्रियजनहरूसँग उत्कृष्ट पलहरू बिताउनको लागि फुर्सत र रमाइलो गर्ने कलाको वास्तविक कार्यहरू र जसमा खेलाडीहरूको ठूलो समूहलाई स्वीकार गर्नुका साथै सामान्यतया उमेरको दायरा हुन्छ। केही सिफारिसहरू तिनीहरू छन्:
डिसेट पार्टी र सह परिवार
Diset - पार्टी र सह परिवार ...
यो क्लासिक पार्टी हो, तर परिवारको लागि विशेष संस्करणमा। 8 वर्ष को उमेर देखि उपयुक्त। यसमा तपाईंले धेरै परीक्षणहरू प्रदर्शन गर्नुपर्छ जब यो तपाईंको पालो हो, र यो टोलीहरूमा खेल्न सकिन्छ। अनुकरण गर्नुहोस्, कोर्नुहोस्, नक्कल गर्नुहोस्, प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्, र रमाईलो क्विजहरू पास गर्नुहोस्। सञ्चार, भिजुअलाइजेशन, टोली खेल, र लजालुपन हटाउने तरिका।
तुच्छ पीछा परिवार
मामूली बोर्ड खेल ...
8 वर्ष पुरानो देखि सबै उमेरका लागि उपयुक्त खेल। यो क्लासिक प्रश्न र उत्तर खेल हो, तर पारिवारिक संस्करणमा, किनकि यसले बच्चाहरूको लागि कार्डहरू र वयस्कहरूका लागि कार्डहरू समावेश गर्दछ, तपाईंको ज्ञान परीक्षण गर्न सामान्य संस्कृतिका 2400 प्रश्नहरू सहित। थप रूपमा, एक शोडाउन चुनौती समावेश छ।
म्याटेल खेलहरू -...
तिनीहरूले 8 वर्षको उमेरदेखि सबै खेल्न सक्छन्,2देखि4खेलाडीहरू खेल्न सक्ने क्षमता वा टोलीहरू पनि बनाउन सक्छन्। यो परिवारहरूको लागि उत्कृष्ट बोर्ड गेमहरू मध्ये एक हो, जसको उद्देश्य तस्विरहरू मार्फत शब्द वा वाक्यांश अनुमान लगाउनु हो। सेतोबोर्ड, मार्करहरू, अनुक्रमणिका कार्डहरू, बोर्ड, समय घडी, पासा, र 720 कार्डहरू समावेश गर्दछ।
परिवार बूम - को खेल ...
सम्पूर्ण परिवार यस क्लासिक खेलमा संलग्न हुन सक्छ। 300 विविध र रमाईलो कार्डहरू, एउटा बोर्ड, खेल्न सजिलो, चुनौतीहरू, कार्यहरू, पहेलोहरू, लाड गर्ने, धोखाहरूका लागि सजायहरू, आदि सहित। तपाईंका सबै प्रियजनहरूलाई जम्मा गर्ने र राम्रो समय बिताउने उत्तम तरिका।
परिवार बूम किन्नुहोस्
सम्पूर्ण परिवारले खेल्न सक्छ, 10 वर्षको उमेरबाट सिफारिस गरिएको। यो एक रमाइलो र गतिशील खेल हो जसमा तपाइँ पजलहरू समाधान गर्न आफ्नो रचनात्मकता र कल्पना विकास गर्नुहुन्छ। एक खेलाडीले सार्वभौमिक आइकनहरू वा प्रतीकहरू जोड्नु पर्छ अरूलाई यो के हो भनेर अनुमान लगाउन प्रयास गर्न (वर्ण, शीर्षक, वस्तुहरू, ...)।
शब्दहरु संग प्रेम परिवार संस्करण
युवा र वृद्धहरूको लागि एउटा खेल, परिवारको रूपमा खेल्न र सहभागीहरू बीचको बन्धनलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न। नातिनातिना, हजुरबा हजुरआमा, आमाबाबु र बच्चाहरूलाई अपील गर्न डिजाइन गरिएको, उनीहरूलाई रमाइलो प्रश्नहरू र विकल्पहरूको साथमा 120 कार्डहरूको साथमा रमाइलो समय बिताउन मद्दत गर्नुहोस् जसले विभिन्न कुराकानी शीर्षकहरूमा नेतृत्व गर्दछ।
शब्दहरु संग प्रेम किन्नुहोस्
बिजाक बच्चाहरु आमाबाबु विरुद्ध
बिजाक गेम सन्स अगेन्स्ट...
परिवारका लागि अर्को उत्कृष्ट बोर्ड गेम, सबै सदस्यहरूका लागि प्रश्न र चुनौतीहरू सहित। विजेता त्यो हुनेछ जसले पहिले बोर्ड पार गर्छ, तर त्यसको लागि तपाईंले प्रश्नहरू सही गर्नुपर्छ। यो समूहमा खेलिन्छ, आमाबाबु विरुद्ध बच्चाहरु संग, यद्यपि मिश्रित समूह पनि बनाउन सकिन्छ।
आमाबाबु विरुद्ध छोराछोरी किन्न
यस पारिवारिक बोर्ड खेलमा, प्रत्येक खेलाडीले भरिएको जनावरको भूमिका लिन्छ जसले आफूले मन पराउने केटीलाई बचाउनु पर्छ, किनकि उनी दुष्ट र रहस्यमय निकायले अपहरण गरेको छ। समावेश गरिएको स्टोरीबुकले कथा र बोर्डमा पछ्याउने चरणहरूको लागि मार्गदर्शकको रूपमा काम गर्नेछ ...
Stuffed Fables किन्नुहोस्
धमाका! जंगली पश्चिम खेल
एउटा कार्ड खेल जसले तपाईंलाई वाइल्ड वेस्टको समयमा फिर्ता लैजान्छ, धुलो सडकमा मृत्युको द्वन्द्वको साथ। यसमा, गैरकानुनीहरूले शेरिफको विरुद्धमा सामना गर्नेछन्, शेरिफले आउटलाउहरू विरुद्ध सामना गर्नेछन्, र विद्रोहीले कुनै पनि बामडोसमा सामेल हुन गोप्य योजना बनाउनेछ ...
एउटा खेल जसमा डरलाग्दो पाहुनाहरू, गुन्डाहरूको परिवार र एउटा हवेली हुनेछ। के गलत हुन सक्छ? यो ग्लोमको कार्ड गेम हो, जुन आधारभूत खेलमा विस्तारको रूपमा आउँछ।
अनुपयुक्त अतिथिहरू खरिद गर्दै
परिवारको रूपमा खेल्नको लागि रमाइलो बोर्ड गेमहरू
तर यदि तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ भने अलि अगाडी जानु हो र हाँस्न नरोक्न, हाँसोले रुनु, र पेट दुखाउनको लागि रमाईलो बोर्ड गेमहरू फेला पार्नु हो भने, यहाँ अरूहरू छन्। शीर्षकहरू जसले तपाईंलाई उत्तम समय बनाउँदछ:
हेड-टू-हेड द्वन्द्वको बटालियनको खेल बन्द
सबै उमेरका लागि उपयुक्त पारिवारिक बोर्ड खेल, प्रतिस्पर्धी र आलोचनात्मक व्यक्तिहरूको लागि सिर्जना गरिएको। यसमा तपाइँका आफन्तहरूसँग आमनेसामने गर्न 120 अद्वितीय द्वन्द्वहरू छन्। तिनीहरूमा तपाईंले आफ्नो क्षमता, भाग्य, साहस, मानसिक वा शारीरिक क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। धेरै छिटो र रमाइलो द्वन्द्वहरू बनाइन्छ, जबकि बाँकी खेलाडीहरूले विजेता निर्णय गर्न निर्णायकको रूपमा काम गर्छन्। हिम्मत गर्नुहुन्छ ?
परिवारहरूका लागि मनपर्ने खेलहरू मध्ये एक जससँग तपाईंको धैर्यता, सञ्चार र नक्कल मार्फत प्रसारण गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्न। यो बच्चाहरु, किशोरहरु र वयस्कों को लागी उपयुक्त छ। सबैले रमाइलो खेल्न र अन्तरक्रिया गर्नेछन्। यसमा बिभिन्न कोटीका 250 कार्डहरू समावेश छन् र तपाईंले इशाराहरू मार्फत के व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर अरूलाई अनुमान लगाउनु पर्छ।
यो खेल कल्पना, आविष्कार र रमाईलो कथा कथन मन पराउनेहरूको लागि हो। यसमा9पासा (मूड, प्रतीक, वस्तु, स्थान, ...) छन् जुन तपाईंले कथाहरूका लागि 1 मिलियन भन्दा बढी संयोजनहरूसँग रोल गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले के लिएर आउनुभएको छ भन्ने आधारमा सिर्जना गर्नुपर्नेछ। ६ वर्ष र माथिका लागि उपयुक्त।
हसब्रो गेमिङ- ट्विस्टर...
पारिवारिक रमाइलोको लागि अर्को उत्कृष्ट खेलहरू। यसमा रङहरू सहितको चटाई छ जहाँ तपाईंले शरीरको भागलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं अवतरण गर्नुभएको रूलेट बक्समा संकेत गरिएको छ। पोजहरू चुनौतीपूर्ण हुनेछन्, तर निश्चित रूपमा तपाईंलाई हँसाउनेछ।
ककटेल खेल - उघा ...
7+ उमेरका लागि उपयुक्त सम्पूर्ण परिवारको लागि कार्ड खेल। यसमा तपाईं गुफाहरूको प्रागैतिहासिक जनजातिको जुत्तामा जानुहुन्छ, र प्रत्येक खेलाडीले बाहिर आउने कार्डहरू र कुलको नयाँ नेता बन्ने उद्देश्यका साथ शोर र ग्रन्टहरूको श्रृंखला दोहोर्याउनु पर्छ। यस खेलको बारेमा कठिन कुरा यो हो कि तपाईंले कार्डहरूको आवाज वा कार्यहरू याद गर्नुपर्नेछ जुन बिस्तारै जम्मा हुनेछ र तपाईंले तिनीहरूलाई सही क्रममा खेल्नुपर्छ ...
Ugha Bugha किन्नुहोस्
Devir - Ubongo, खेल ...
Ubongo सम्पूर्ण परिवारको लागि सबैभन्दा रमाइलो खेलहरू मध्ये एक हो, 8 वर्ष भन्दा माथिका मानिसहरूका लागि सिफारिस गरिएको। यसका सृष्टिकर्ताहरूले आश्वस्त पार्छन् कि यो उन्मादपूर्ण छ किनभने खेलाडीहरूले कसरी एकैसाथ आफ्नो टोलीमा टुक्राहरू फिट गर्ने प्रयास गर्नेछन्; यो लत हो किनभने जब तपाइँ सुरु गर्नुहुन्छ तपाइँ रोक्न सक्षम हुनुहुने छैन; र यसको नियमहरूको सन्दर्भमा सजिलो।
राम्रो पारिवारिक बोर्ड खेल कसरी छनौट गर्ने?
राम्रोसँग छनौट गर्न सबै भन्दा राम्रो परिवार बोर्ड खेल, केहि आवश्यक विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ:
तिनीहरूसँग सजिलो सिक्ने वक्र हुनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि खेलको मेकानिक्स युवा र वृद्ध दुवैको लागि बुझ्न सजिलो छ।
तिनीहरू सम्भव भएसम्म कालातीत हुनुपर्छ, किनकि यदि तिनीहरू विगत वा केही आधुनिक चीजहरूसँग सम्बन्धित छन् भने, साना र वृद्धहरू केही हदसम्म हराउनेछन्।
र, निस्सन्देह, यो सबैको लागि रमाईलो हुनुपर्दछ, अधिक सामान्य विषयवस्तुको साथ र एक विशिष्ट दर्शकलाई लक्षित गर्दै। छोटकरीमा, सिफारिस गरिएको उमेरको विस्तृत दायरा छ।
सामग्री सबै दर्शकहरूको लागि हुनुपर्छ, अर्थात्, यो वयस्कहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
सम्पूर्ण परिवारको लागि भएकोले, ती खेलहरू हुनुपर्छ जसमा तपाइँ समूहहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ वा धेरै संख्यामा खेलाडीहरू स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ताकि कोही पनि बाहिर नपरोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल